Please don’t cry when I die – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 24 September 2010 24 September 2010 Categories Poem, Reproduction
7 thoughts on “Please don’t cry when I die”
24 September 2010 at 9:49 pm
Face Book မှာ share ပါရစေ ။ဆရာ့ဘလော့လင့်ခ်နဲ့ပါ
အဲဗျ… ကျွန်တော့် Facebook က မှတ်စုကိုပဲ သည်မှာ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ အဲဒီ့မှတ်စုမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ comment တွေကို နည်းနည်းလေး (ပိစိညှောက်တောက်လေး) ထပ်ဖြည့်၊ တည်းဖြတ်ထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ ကြိုက်သလို ဝေမျှကြပါခင်ဗျာ။ ဆရာမိုးဟိန်းကို ချစ်ခင်တဲ့စိတ်၊ လေးစားကြည်ညိုတဲ့စိတ်၊ လွမ်းဆွတ်တသတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ကြတာပဲဗျာ။ ဆရာမိုးဟိန်းလည်း ကျေနပ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ ကိုကြီးကျော်ရာ။ ရေးတဲ့သူဟာ လောကကြီးမှာ အသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားပုံကိုကသက်သေ ပြနေပါတယ်။ ငါသေသွားပြီးရင် ငါ့ကိုရည်းစူးပြီး ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူး လို့ ပြောရဲလောက် နေထိုင်ကျင့်ကြံသွားရမယ်လို့ မိန့်ကြားလေ့ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားနဲ့လဲ ထပ်တူကျပါတယ်။ လေးစားဦးညွတ်ပါတယ် ဆရာမိုးရယ်။ ပြန်ဖော်ပြပေးတဲ့ကိုကြီးကျော်ကိုလဲ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
25 September 2010 at 2:02 pm
သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး ဗျာ…..။ အခုလို ပြန်ပြီး ဖြန့်ဝေတာ အရမ်းကျေးဇုးတင်ပါတယ်…..။
Profuse Thanks for posting this poem and information.Sir. Sir U Moe Hein ‘s lectures and his precious poems will stick in our pupils’ hearts.
ရေးတာ ရဲရင့်လိုက်တာနော် ဆရာ။ အဲလိုရေးနိုင်ဖို့ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်ယုံကြည်နိုင်ဖို့ တော်ရုံလူမလုပ်နိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်။
30 October 2011 at 5:44 pm
တကယ်မြင့်မြတ်ပြီး လေးနက်တဲ့စိတ်ထားပါ….အတုယူစရာကောင်းလှပါတယ်…ဆရာ့ဘလော့လင်ခ့်နဲ့ ပဲ fb မှာ share ရစေ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ..
Previous Previous post: A Post on Facebook
Next Next post: About In Laws